Amanqaku oMculo akhiwe njani
Awunakufunda okanye ubhale umculo ngaphandle amanqaku . Ukuba ucinga ngomculo njengolwimi, amanqaku afana noonobumba. Ukuba uyazi ukuba ungawabona njani amanqaku, unokufunda ulwimi.
Amanqaku enziwe ngamacandelo amathathu athile: intloko yenqaku , isiqu , kunye iflegi . Inqaku ngalinye linentloko - yinxalenye ejikelezayo yenqaku. Isiqu senqaku ngumgca othe nkqo uqhotyoshelwe kwintloko yenqaku. Iflegi yenqaku ngumgca omncinci ophuma phezulu okanye ezantsi kwesitshixo senqaku.
Inqaku ngalinye linentloko. Inqaku lesibhozo (elesithathu eliboniswe apha) linamacandelo amathathu enqaku: intloko, isiqu, kunye neflegi.
Ngendlela, iziqu zinokukhomba phezulu okanye ezantsi, kuxhomekeke phi kwi abasebenzi ziyavela (ukwalatha phezulu okanye ezantsi akwenzi mahluko kwixabiso lenqaku). Amanqaku asibhozo kuphela kunye namanqaku amancinci aneeflegi. Amanqaku ekota kunye nesiqingatha samanqaku aneziqu kodwa akukho flegi. Amanqaku apheleleyo awanazo iziqu okanye iiflegi.
i-triamterene hctz 37.5 25
Endaweni yenqaku ngalinye lokufumana iflegi, nangona kunjalo, amanqaku aneeflegi anokuqhagamshelwa komnye nomnye nge umqadi (ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yi- igigature ), eyiyo enye into, ejongeke ngakumbi ukubonakala komzimba. Umzekelo, amanqaku amabini asibhozo angabhalwa nganye ineflegi, okanye idityaniswe ngumqadi.
Amanqaku asibhozo anokuqhagamshelwa kunye kunye nemiqadi endaweni yokuba neeflegi ezizezinye.
Amanqaku alishumi elinesithandathu anokufumana iiflegi, zinokudibaniswa zibe ngamabini adityaniswe ngumqadi ophindwe kabini, okanye zonke zinokudityaniswa ngumqadi omnye ophindwe kabini. Ayinamsebenzi nokuba zibhalwe ngayiphi indlela, beziza kuvakala ngokufanayo xa zidlalwa.
La maqela amathathu enqaku leshumi elinesithandathu, abhalwe ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo, aya kuvakala ngokufanayo xa edlalwa.
Ngokukwanjalo, amanqaku asibhozo anamashumi amathathu anesibini angabhalwa ngeendlela ezininzi. Qaphela ukuba amanqaku angamashumi amathathu anesibini afumana Ntathu iiflegi (okanye iiplanga ezintathu).
Njengamanqaku asibhozo kunye namanqaku alishumi elinesithandathu, amanqaku angamashumi amathathu anesibini angabhalwa ngokwahlukeneyo okanye adityaniswe kunye.
Sebenzisa imiqadi endaweni yeeflegi ezizodwa kumanqaku yimeko yokuzama ukucoca isiqwenga somculo esijongeka ngathi sonakele.
I-vyvanse yomelele kune-adderall
yintoni ebangela iingono ezibuhlungu
indlela yokubonisa izinja amadlala akudala
I-norco 5 325 mg iipilisi
ithatha ixesha elingakanani i-suboxone block opiates
tramadol / apap 37.5mg / 325mg